Indlu entsha yegadi enemibono, iWi-Fi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMartina
Indawo yakho ibekwe kumbindi weSithili seLake saseSalzburg kumda wogcino lwendalo iWallersee engekude kumbindi wesixeko iSeekirchen. Nge-S-Bahn ukwimizuzu nje eli-12 kwisixeko saseMozart eSalzburg. Uya kuyithanda indawo yethu yokuhlala ngenxa yombono omangalisayo, ibhedi yokuphumla emangalisayo kwithafa, ukuzola, indawo entle engqongileyo kunye ne-ambience yale mihla. Indawo yethu yokuhlala ilungele (uthando) izibini, abangabodwa kunye nabahambi beshishini.
Bobabini ukusuka kwi-terrace kunye negumbi lokuhlala unombono omangalisayo okhupha ukuzola. Zombini umgangatho kunye nefenitshala yenziwe nge-oki ene-oyile kwaye idlulisela imozulu entle. Ikhitshi exhotyiswe kakuhle ayishiyi nto ifunekayo. Uyakuxabisa ukuba akukho mgangatho okanye isixhobo esiye sagcinwa.
4.98 · Izimvo eziyi-60
Indlu yakho ikwindawo encinci yokuhlala ezolileyo. Ngeenyawo uye emva kwemizuzu emithathu imbono entle yogcino lwendalo iWallersee, ekumema ukuba uhambe, uhambe okanye ubaleke njlnjl. Ulwandle Seekirchen am Wallersee unokufikelela kwimizuzu nje embalwa. Kodwa kumbindi wesixeko saseSeekirchen, isikhululo sikaloliwe, iyunivesithi yabucala iSeeburg kunye neWallersee zikumgama wokuhamba ngokulula. Kwisixeko saseMozart eSalzburg udinga imizuzu eyi-12 kuphela ngololiwe. Uhambo oluninzi, z. B. ukuya Hallstatt okanye Berchtesgaden nto emi endleleni.
Ngokuqinisekileyo sifuna ukugcina ubumfihlo bakho.
Inombolo yomthetho: 50339-000194-2020